]Abakhiqizi be-graphite ebelekile, i-graphite yobumba ebekiwe, i-silicon carbide graphible ebekiwe - i-ptlerceramic
Ikhaya > Imikhiqizo > I-graphite ecashile
Ama-graphite ama-brucibles yizitsha ezihlekisayo ezakhiwe ngokukhethekile imisebenzi ye-metallurgical. Lezi zenziwe ngengxube ye-graphite, ubumba obuqili, i-grog nezinye izithasiselo. ... ama-rucibles atholakala nge-spout noma ngaphandle kokuphuma. Lezi zinwele zisetshenziselwa ukuncibilika kwe-Ferrous, ama-alloys angewona ama-folroys nama-noble izinsimbi.
I-graphite ehlakaniphile yisitsha esisetshenziselwa ukuncibilika nokuphonsa izinsimbi ezingafani, ezingezona zensimbi njengegolide, isiliva, i-aluminium nethusi. Isizathu esiyinhloko ama-graphite ama-graphite athandwa njengethuluzi lokukhiqiza ukuvumelanisa kwawo okushisayo, ukumelana nokushisa okuphezulu, ukwakheka okuthe xaxa okuphezulu kwezicelo zokushisa okuphezulu, kanye nezakhiwo zazo ezi-anti zibheke ngokushesha nokupholisa. Bangamelana nokukhulisa ama-acid kanye nezixazululo ze-alkali futhi banokuqina okuhle kwamakhemikhali.
I-Graphite ingakhiqizwa kusuka kugrafu yemvelo okuyisimo sekhabhoni esenzeka ngokwemvelo. Le ndlela ye-graphite yenziwa ngokuhlanganisa i-graphintite ngodaka olumelana nomlilo noma ikhabhoni diokdijini.
I-Graphite yokwenziwa ikhiqizwa ngokucubungulwa kwePetroleum Pitch kanye ne-Petroleum Coke, okuyi-byproduct yenqubo yokucwengwa kwamafutha. Inokuqukethwe okuphezulu kwe-carbon okulungiselelwe okuphelele ngokungcola okumbalwa nokuqukethwe okuphansi kwesibabule.
Izinga le-graphite liyanqunywa ukuthi lenziwa kanjani, elithonya isakhiwo salo, ubuningi, ukuqina namandla namandla.
Kunezindlela ezintathu zokwakha ukwakheka, okukukhishwa, okudlidliza, kanye nokucindezela kwe-isostitcalcal.